Apple dia namoaka doka vaovao roa hampiroboroboana ny rivotra iPad | Vaovao IPhone
Apple dia mandefa doka vaovao roa hampiroboroboana ny iPad Air
Apple dia manomboka ny herinandro amin'ny famoahana ny doka roa vaovao mampiroborobo ny iPad Air, manohy izany amin'ny fampielezana doka Your Verse izay efa hitantsika tany amin'ny toeran'ny orinasa hafa.
Ireo doka Apple ireo dia miavaka amin'ny fiezahana hampiseho amin'ny mpampiasa inona no azo atao miaraka amin'ny sasany amin'ireo vokatra, amin'ity tranga ity, ny iPad Air. Ny fitaovana tsara dia tsy maintsy ampiasain'ny rindrambaiko tsara ary mazava fa ao amin'ny App Store misy vatosoa tena izy, eny, tokony ho fantatrao ny fomba hitrandrahana azy ireo.
Ao amin'ny doka voalohany dia hitantsika ny fomba nataon'i Esa-Pekka, mpamoron-kira iray izay mpitendry piano sy mpitarika, ampiasao iPad na aiza na aiza hanaovana izay tianao indrindra - ankafizo ny mozikao ary manorata mba hahafahan'ny rehetra mankafy azy.
Amin'ny tranga Chérie King dia a mpandeha vehivavy mampiasa iPad Air mba hifandraisana amin'ireo olon-tiany, hahafantatra ny zava-drehetra momba ireo toerana halehany ary ho fitaovana hitantara an'izao tontolo izao ny tantarany.
Mazava fa ny tena mety ananan'ireto fitaovana ireto (ary tsy miresaka momba ny iPad fotsiny aho) dia mitoetra ao amin'ilay olona mampiasa azy ary na dia marketing aza izany, azo antoka fa misy olona maro taratra amin'ireo doka ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Air » Apple dia mandefa doka vaovao roa hampiroboroboana ny iPad Air
Nintendo GBA4iOS emulator dia niverina